Man United Oo Doonaysa Ronaldo, Juve Oo Sugaysa Pogba, Kane Oo Go'aan Gaadhay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaMan United Oo Doonaysa Ronaldo, Juve Oo Sugaysa Pogba, Kane Oo Go’aan Gaadhay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka
Man United Oo Doonaysa Ronaldo, Juve Oo Sugaysa Pogba, Kane Oo Go’aan Gaadhay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka
April 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Wargeysyada ciyaaraha ayaa si joogto ah usoo bandhiga xogta, xanta iyo dhaqdhaqaaqa suuqa, waxaananu idiinka soo xulnay qodobbadii ugu waaweynaa ee ay qoreen maanta oo Arbaca ah.
Weeraryahanka England ee Harry Kane oo 27 jir ah, ayaa doonaya in uu sii joogto Horyaalka Premier League, waxaanu ku biiri doonaa Manchester United ama Manchester City, haddii uu ka tago Tottenham. (Independent)
Xiddiga reer Brazil ee Neymar oo 28 jir ah, waxa uu heshiis cusub oo waqti kordhin ah u saxeexi doonaa Paris St-Germain, waxaanu caddeeyey in arrintaasi soo dhamaan doonto. (ESPN Brazil)
Manchester United ayaa doonaysa in ay dib ula soo saxeexato xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo 36 jir ah, isla markaana uu qayb ka noqdo heshiiska Paul Pogba oo isagana lala xidhiidhinayo in uu ku laabanayo Juve. (Calciomercato)
Manchester United waxa kale oo ay doonaysaa in xagaaga soo socda ay lasoo saxeexato difaaca Real Madrid iyo xulka France ee Raphael Varane. 27 jirkan ayaa lagu qiimeeyey £60 milyan oo Gini. (Mail)
United iyo Chelsea waxay xiisaynayaan Paulo Dybala oo 27 jir ah. (Tuttosport)
Tottenham ayaa ku fikiraysa in macallinka Wolves ee Nuno Espirito Santo ay ku beddesho Jose Mourinho. (Express)
Chelsea ayaa doonaysa difaaca Atletico Madrid iyo xulka Uruguay ee Jose Maria Gimenez oo 28 jir ah, laakiin waxa kale oo ay danaynayaan Jules Kounde oo ah 22 jir u ciyaara Sevilla, una dhashay Faransiiska. (La Razon)
Real Madrid waxay kalsooni buuxda ku qabtaa in ay xagaagan lasoo saxeexan doonto weeraryahanka PSG ee Kylian Mbappe, laakiin 22 jirkan ayay suurtogal tahay in uu sii joogo Paris Saint-Germain. (Goal)
Barcelona waxay dalab ka gudbinaysaa weeraryahanka Manchester City ee Sergio Aguero oo ah 32 jir uu dhamaaday qandaraaskiisii Etihad, laakiin ma siin doonto mushaharka uu dalbanayo oo ah 10 milyan oo Euro, waxaana kaliya siin karaysa Juventus. (Sport)
Boca Juniors ayaa danaynaysa laacibka khadka dhexe ee Lucas Torreira oo amaah kaga maqan Arsenal. 25 jirkan reer Uruguay ayaa la sheegay in aanu doonayn in uu Atletico Madrid oo uu hadda joogo si rasmi ah ugu biiro. (TyC Sports)
Difaaca reer Ivory Coast ee Eric Bailly oo 27 jir ah, ayaa iska diiday heshiis cusub oo Manchester United usoo bandhigtay, waxaanu doonayaa in uu xagaaga iskaga tago. Heshiiska uu kula jiro United ayaa dhacaya xagaaga sannadka dambe. (ESPN).